I-PHARRELL YEGOODTIME IHOTELE EVULEKILEYO YOKUBHUKISHA - UYILO LWEKHAYA
I-Pharrell's I-Goodtime Hotel ivulekele ukubhukisha
Umsebenzi wokuqala kaPharrell kwilizwe lehotele uphezulu kwaye uyasebenza, kunye neGoodtime hotel evulelekileyo yokubhukisha. Ophumelele imbasa yeGrammy uye wadibana nosomashishini osekwe eMiami uDavid Grutman weprojekthi. Efumaneka eWashington Ave eSouth Beach, eMiami, uPharrell ukufanise ukuhlala ehotele nokuba kwifilimu yeWes Anderson.
Ixesha elilungileyo liya kulukhanyisa olu luntu, utshilo uPharrell kudliwanondlebe naye Olwandle Drive . Abantu bazokukhuthazwa yile nto siyenzayo apha. Iya kuba ngamandla, ukungcangcazela okuhle, indawo elungileyo, kwaye, ewe, lixesha elifanelekileyo.
eyakhelwe kwimibono yeyunithi yodonga
Ihotele ibineminyaka emithathu isenziwa, kwaye ubhubhane we-COVID-19 ubuyisela umhla wokuvula. I-duo ka-Pharrell kunye no-Grutman bafuna ukuyila kwakhona i-Washington Avenue njengeziko lenkcubeko elinamandla.
UFarrell uthe kum, 'Ndicinga ukuba masiyinike igama elithi iGoodtime njengegama elinye' - kwaye siyitshintshe ngokwenene ingxelo, utshilo uGrutman kudliwanondlebe kunye Ukuqhuba kolwandle e. Lowo ibe ngumbono wethu kuyo yonke into esiyenzayo. [Kwiminyaka yakutshanje], iWashington Avenue khange icingelwe njengenkwenkwezi. Sifuna ukuyitshintsha-ayizukuba yindawo yokubeka intloko.
U-Pharrell no-Grutman baphuma kunye noyilo, befaka umyili wehlabathi owaziwayo uKen Fulk kunye nomyili wezakhiwo uRaymond Jungles ukudala umbono wabo. Amagumbi anoluvo olungelulo, ebuyela emva kwii-80s ngeendlela ezininzi zemibala ye-pastel.
Iimpawu ezibonakalayo zibandakanya iphuli enkulu yangaphandle, ilayibrari, kunye nendawo ephambili yehotele, iNyanga yeStrawberry, indawo yokutyela yaseMeditera enezitulo zangaphakathi nangaphandle.
Imikhono yolwandle enomxholo omnyama nomhlophe
Ukuba ujonge ukuphela kwempelaveki okanye ufuna nje ukubaleka iintsuku ezimbalwa, yiya Ihotele iGoodtime kwaye ubhukishe igumbi. Awuyi kudana.
Bona ngakumbi malunga - Indawo yokuqala yehotele ukuvula ngo-2027
iingcamango zesilingi ezigumbini lokuhlala
iiTattoo zesikolo esidala samadoda
Izimbo zeenwele zobuso zamadoda
Utata kunye nonyana uphawu lwe tattoo